महामारीमा शहरको बसाई ठिक कि गाउँ ? | Janaandolan
Home समाचार समाचार महामारीमा शहरको बसाई ठिक कि गाउँ ?
नेपालसहित विश्वका २१० वटा राष्ट्रका जनता अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिममा छन् । नेपालमा पहिलो चरणमा नौ जनामा देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमण थप तीनजनामा देखिएको पुष्टि भएको सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
संक्रमण जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकारले लकडाउन गरेका कारण विगत २० दिनदेखि अधिकतम नागरिकको दैनिकी घरबासमा वितिरहेको छ । सामान्यतया राहत वितरणमा सक्रिय ब्यक्ति, संभावित जोखिम नियन्त्रणका लागि खटिएका ब्यक्ति, सुरक्षा निकाय आदि सक्रिय रहेपनि अधिकांशले घरबासमै जीवन विताइरहेका छन् । विभिन्न प्रकृतिका महामारीहरु कहिले काँही आइरहन्छन् । अनि यस्ता महामारीका बेला गाउँको बसाई ठिक कि शहरको भन्ने बहस अहिले चल्न थालेको छ ।
विभिन्न सेवा सुविधाका कारण शहर पस्नेहरुको भिड त्यत्तिकै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विकास निर्माण, सुविधाको उपयोगलगायत विभिन्न खालका सेवा सुविधाको खोजीका साथै पेशा–व्यवसाय, जागिर लगायतका विविध कारणले शहरप्रति जनआकर्षण बढेको छ । अर्थात गाउँबाट शहरमा बसाइ सर्नेको चाप बर्षेनी बृद्धि भइरहेको छ । यस्तो संकट नआएको अवस्थामा शहरलाई राम्रो भएपनि विपतमा भने बस्नका लागि गाउँ नै ठिक भन्न थालेका छन्–शहरबासीहरु ।
कोरोना संक्रमण जोखिमको यो समयलाई महामारीको रुपमा लिंदै यथासंभव आ–आफ्नो स्थानमा सुरक्षित भएर बस्नु नै उत्तम हुने विर्तामोडका अच्युत दाहालको सुझाव छ । विर्तामोडमा अग्र्यानिक कोशेली घर सञ्चालन गर्दै आएका दाहाल हाल अर्जुनधारास्थित गाउँको घरमा बस्दै आएका छन् । उच्च सतर्कता र सजगता अपनाएर बसेको खण्डमा सुरक्षाकै लागि गाउँ या शहर भन्ने कुरा गौण हुने उनको भनाइ छ । तर शहरको बसाई कोठामा सिमित हुने भएकाले समस्या पनि हुनसक्ने बताउँदै उनी भन्छन्–‘लामो समयसम्म महामारीको भयमा बस्नुपर्दा सहरमा अरु धेरै मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या, भावानात्मक समस्या देखिन सक्छ ।’ भिडभाडका कारण पनि शहरमा महामारीबाट जोगिन समस्या हुने बताउँदै उनी भन्छन्–‘भिडभाडबाट जोगिन गारो हुन्छ, त्यसमा अति आवश्यकीय दैनिक उपभोग्य बस्तु किनमेल गर्न पनि समस्या पर्न सक्छ ।’
शहरको बसाइमा शारीरिक श्रमको अभावले तनाव उत्पन्न हुनसक्ने खतरा आफूले देखेको बताउँदै दाहालले भने–पुरानो रोगको समस्या पनि बढन सक्छ, भने शारीरिक स्वास्थ्य समस्या समेत उत्पन्न हुन सक्छ ।’
त्यसो त शहर बसाईका केही फाइदाहरु पनि देखेका उनी भन्छन्-‘उपचारसँग सम्बन्धित निकायहरु बढी शहर केन्द्रीत हुनाले कुनै जटिल समस्या आउँदा गाउँमा उपचारको अभाव अवश्य हुन्छ, तैपनि समग्रमा हेर्ने हो भने स्वच्छ हावापानी, प्राकृतिक वातावरण जस्ता कुराले अलि बढी गाउँमा नै सुरक्षित रहिन्छ कि जस्तो लाग्छ ।’
झापाको गोलधापपछि बुधबारेमा बसेर हाल विर्तामोडको शहरी वातावरण भोगिरहेकी यशोदा पोखरेल चापागाँई शहर भन्दा गाउँ नै राम्रो हुने बताउँछिन् । शहरमा बढी परनिर्भरता देख्ने उनी भन्छिन्–‘सहरको बसाईमा बढी परनिर्भरता हुन्छ, किन्न पाएपनि सुरक्षित हुन्न ।’ गाउँमा आफ्नै खेतबारीमा केही न केही उत्पादन हुने भएकाले दैनिकी सहज हुने बताउँदै उनले थपिन्–‘खेतबारीमा तरकारी हुन्छ, आफैंले केही न केही उत्पादन गरेको हुन्छ, फेरि गाउँमै हुर्के–बढेकाले पनि होला मलाई त गाउँ नै मन पर्छ । संकटका बेला गाउँको बसाई नै ठिक लाग्छ ।’
हाल विर्तामोड निवासी राधिका चुडाल पनि शहरको भन्दा गाउँको बसाई अलिक राम्रो लाग्ने बताउछिन् । ‘स्वच्छ वातावरण, आफ्नै खेतवारीमा औषधीजन्य बोटविरुवा हुनुका साथै बाहिरका मान्छे छिटो नपुग्नाले महामारी फैलिने डर कम हुन्छ’–उनी भन्छिन्–
‘वातावरण स्वच्छ हुन्छ, खेतबारीका हरेक विरुवामा ओखती हुन्छ, बाहिरबाट मानिसहरु छिटो पुग्दैनन् त्यसले महामारी फैलिने डर कम हुन्छ ।’ त्यसो त सबैभन्दा ठूलो कुरा शहरका मान्छेले मावनताका कुरामात्र गर्ने तर आपतमा सहयोग नगर्ने हुनाले पनि सहरभन्दा बस्नका लागि गाउँ ठिक भन्ने चुडालले भनिन्–‘मान्छेमा मानवता हुन्छ । सहरमा मानवताको गीतमात्र गाइन्छ, बाध्यताले शहर बस्नु परेपनि गाउँकै बसाई राम्रो लाग्छ ।’
उनको जस्तै भनाई छ कोहवरा स्थायी घर भइ हाल विर्तामोड बस्दै आएका महेन्द्र श्रेष्ठको पनि । उनलाई पनि शहरभन्दा गाउँकै बसाई सहज लाग्छ रे । गाउँको वातावरण स्वच्छ र राम्रो हुनुका साथै
विषादीरहित उत्पादन खान पाइने भएकोले महामारी तथा विपतमा गाउँको बसाई सुरक्षित र ठिक लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘वातावरण राम्रो, भिडभाड नहुने, अग्र्यानिक उत्पादन पाउने भनेको गाउँमा नै हुन्छ’–उनले भने । त्यसो त संकटमा शहरमा एउटा कोठा र घरमै खुम्चिनुपर्ने भएकाले पनि शहरको बसाइ निसासिंदो हुने उनको बुझाई छ । उनी भन्छन्–‘गाउँमा यसो बारी डुल्यो भने पनि दिन जान्छ ।’
गाउँ र शहर एकापसका परिपुरक अवश्य हुन् । तर, हावाको भरमा फैलने महामारीबाट जोखिन भने शहरभन्दा गाउँ नै ठिक जस्तो देखिन्छ । शहरमा समस्या परेका बेला गाउँमा गएर बस्न चाहनेहरुको यतिबेला निकै ठूलो जमात देखिन्छ । तर, जिम्मेवारी र बाध्यताले जान नपाउनु फरक विषय हो ।
Previous articleतरकारीको मूल्य अनुगमन: १ सय देखि ३०० प्रतिशतसम्म मूल्य बृद्धि
Next articleभारतमा मे ३ सम्म थपियो लकडाउनको अवधी
समाचार समाचार महामारीमा शहरको बसाई ठिक कि गाउँ ?